DAAWO: Musharixiintii ugu Badnaa oo Muqdisho ku shiray, Farmaajo & Geedi oo si kulul u hadlay iyo Go’aano (Video) | Kalshaale
DAAWO: Musharixiintii ugu Badnaa oo Muqdisho ku shiray, Farmaajo & Geedi oo si kulul u hadlay iyo Go’aano (Video)
Jan 11, 2017 - 25 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Mushariixinta u taagan Xilka Madaxwaynaha Soomaaliya.
Maxamed C.laahi Farmaajo oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in madaxwayne Xasan sheekh uu Hareer maray Howlihii uu balan qaaday, Wuxuuna sheegay in Hantidii Dawlada loo adeegsanayo Doorashada, Iyadoo Ciidankii iyo Shaqaalihii Dawladu aysan Mushahar qaadan.
Cali Maxamed Geedi oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Fashil xoogan ay Soomaaliya Food saartay Afartii sano ee lasoo dhaafay, Wuxuuna Umada Soomaaliyeed ugu baaqay inayna Hantidooda iska gelin Goobaha dadwaynaha ee laga iibiyey.
Ugu Danbayntii Waxay soo saareen Go’aano ka kooban Kulamadii u socday Mushariixin gaadhaya 18 oo la baxay Isbadal doonka Soomaaliya.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (25)
kuwani musharaxiin madaxweeyne maahan, ee waa daanyeero, diidan in lahogaamiya, maadaama eey caqli iyo kartiba laheeyn.
Waa daanyeero doonaya in eey Somaliya fursadda dowladnimada lagusoo celinaya in eey ka dhumiyaan.
Waan dhaleeceeyn, waana nasiib darro, in Madaxweeynahii hore Shiiq Shariif uu la fadhiisto, lana shirshiro kuwaan ciyaala suuqa ah, ee qeeyrul mas’uuliyiinta ah, ee doonaya in qalalaaso siyaasadeed lagaliya Somaliya guud ahaan, gaar ahaana Mogadisho.
Halajoojiya caqli xumada, iyo 4 sanno kasta oo kii 4 sanno kahor ladoortay la dhaliilayo. Mushkiladu maahan hogaamiyaha dalka, ee mushkilada waa dadka Somaliyeed, qaasatan Koonfurta Somaliya, oo caqli daanyeernimo ku dhaqmaya. Oo aan ogeeyn Afar Afartaas sanno oo eey iska dabawareeganayaan ayaa ku noqon 40 sanno.
Maxeey ahaayeen kuwaan
Ina adeerow magaca
daanyeer iska dhaaf
Waa gef yuu ilaahay
Xaliimo, waan kusalaamayy, abaayo.
Adiga oo mahadsan, raalina ah, makugu raacsani taladaan aad i siisay.
Ilaaheey anniga iyo adigaba waanaga caqli badan yahay, qaluubteenana xataa waa ogyahay. Sidaas darteed, adigu hadii aad i fahmi weeysay, Ilaaheey wuu i fahamsanyahay, in magaca daanyeer aan uga jeeda “lamid ahaansho eey xaga caqliga” kala mid yahiin dadka qaarkood, bal eeysan daanyeero “literraly” sida eregya eeysan u aheeyn.
Kkkkk walee waayaab adeer hassan oo demeerada ladaaqaba nadax weyne waa noqdaye maxaa udiiday kuwaan anigu waxaan aminsanahay midkasa oo kuwaan kamida in xasan ka xunyahay kkk Mar hadii xasan madax weyne noqdaye waxaa noqonkara kuwa hilib layaasha iyo kuwa jidka xaaqa ee cadaado dadka sharaftale halasimin dameerka faaq faaqle kkkkk wabilaahi towfiiq
Waxaa ku dhegan :
—————- & —————
Madherge ka siidaran .
Alloow Alle : Heeskan baan idiin dooray musharaxiin
” Lan gamaar linku gooyuwa
Ama geeridii lin sheeguwa ,
Galbigey gorafowy “
Waxaan maqlijirey colku dhac oo toogo kuu ciidamisey waa tan manta somaliya heysata kkk xasan tuug ayaa ciidan u noqdaye oo weliba islaquman kkk oo leh waxbaan qabtaye ee haleey doorto waa aan idin xadee idoorta walee waayaab
Walee ragani waa 18 Daayeer.Xagay u socdaa ileen waa ogyihiin wuxu waa 1 kursiye,xataa may iyagu soo kala hadhaan oo mid iska soo reebaan.Ku urur Ayaan samaysanay,hadana 1 Murashax ma wataane – dhamaantood way u wada taaganyihiin doorashada.
18 Waraabe may1 nin soo dirtaan haday run sheegayaan.
Meeshaasi ayaa lacag lagu sheegay.
Mr. BaHaL, waan kusalaamay caaqil.
yes, annigaba waan ku baraarugsanahay in daanyeeradaan laleeyahay waa shireen, oo waxbeey ka hadleen, eeysan ku heshiin in eey hal nin iskasoo saaraan, oo eey isku tanaasulaan.
Sababtaasna waaye waxa cadeeynta u ah caqligooda daanyeernimada.
Cadaado sxb daayeerka wuu daalaye miyaadan ka badaleynin shift’ga . War xayawaanka kale mid kala soo bax oo nasi Daaxuurka .
King Kongaa XABADKA garaacay .
C/Raxmaan, waan kusalaamay saaxiib, lol, kkkk, shiftiga kabadal 🙂
Keebaad i dhihi laheeyd xayawaanada kale wuu ka caqli xun yahay daanyeerka. Kaasbaan kalasoo bixi then.
wiil ciideed says:
Nin kaa taageero xun waligay ma arkin saa xasan baad si nacas nimo ah aad u taageertaa mana ogolid in khaladkiisa laga hadlo.
Ninyahaw aan ku waydiiye ma wax dan ah oo khaas ayaa xasan idinka dhaxeysa?
ma xafiis dowladeed baad ka shaqeysaa?
ma qandaraas buu ku siiyay?
su’aalaha aan kuu soo coodh coodhiye ma interest aad lumineyso ayaa jira haddii xasan baxo?
Fadlan ii soo jawaab!
soomaali caqli xun
horta waa sida eey kulatahay in aan Madaxweeyne Hassan Shiiq si nacasnimo u taageero. Annigana waxaan qabaa in aad adigu iga nacasantahay, saa waxaan ogahay ayaadan ogeeyn. Oo hadii aad ogaan laheeyd waxaan ogahay, Madaxweeyne Hassan Shiiq waad taageeri laheeyd.
Beentaana waaye, in aanan ogoleeyn in Madaxweeyne Hassan Shiiq waxii qalad ah oo uu sameeyo laga hadlaa. Waase goorma? Waa marka eey dhaliishu tahay in latoosiya Madaxweeynaha in larabo. Laakiin, dhaliil iyo munaafaqnimo, iyo beenta eey dadka qaarkood Somalida eey meelaha lataagtaaganyahiin ma’ogoli.
Su’aalahaaga hadaan isku dayo in aan kaaga jawaabo.
Haa, Madaxweeyne Hassan waxaa naga dhaxeeysa dan, taas oo ah, dal, dad iyo diin. Xafiis dowlad waan ka shaqeeyaa, laakiin, dowlada Somaliya ee dhexe amaba dowladaha beelaha maahan.
Maya, Madaxweeyne Hassan Shiiq qandaraas ima siin. Ilaaheey ayaa qandaraas i siiyay.
Haa, interest aan luminaya waa jiraa hadii Madaxweeyne Hassan Shiiq baxo, taas oo ah arrinka ugu horeeya oo aan ka hadlay ee ah dalka Somaliya, iyo dadkeena iyo diinteena ayaa “interest” kooda luminaya, oo fursad qasaartay ayeey noqon.
Cadkii rag isku raacay.
Meeshaba waad ka saartay inuu cadaado caadi u taageero (Without vested interst),isaga oo aan dan shaqsi ah ka helayn.
Wixiiba waxaad ka dhigtay aragti gaaban.
Waxay ahayd inaad su’aalahaaga ku darto bal inuu si daacad ah taageero Madaxwaynaha Somaliyada maaanta.
Adba Axmed Mdoobe ilaa Uhuro Kenyata ayaad taageertaa..
Mr. BaHal, good point, ayaad sheegtay, oo ninkaan wiil ciideed uusan xisaabta ku darsan taas oo ah, in aan si daacad ah iskaga taageeri karro Madaxweeynaha anniga oo wax dan shaqsi ah laheeyn. Thank you.
========== Daayeer & caqli xummi ! ==========
Gabadha walaca ah iyo beerta liindhanaanta waxaa u dhaxeeya WABI . Dabaal ma taqaan gabadha , doon iyo dad kale oo caawiyana ma jirto . Waxayna gabadhu u baahantahay ugu yaraan hal xabbo oo LIINDHANAAN ah . Geedka LIINDHANAANTA ah korkiisa waxaa ku dhooban DAAYEER .
Waxaan tuuryeynayaa / shiidayaa DAAYEERTA iyaguna sida caadada u ah waxay igu soo shiidayaan waxay haystaan = LIINDHANAAN .
Xayawaankaas ma caqli xuma . Doofaarka xaarkiisa cuna ma laaluush buu ku siiyey WIDAAY
Sorry Cadaado aniga waan iska kaftamayaaye bal ka soo jawaab su’aalaha IGAAR CIIDEED .
C/Raxmaan, waan ogahay in aad iska kaftameeyso.
Sheekadaan qosolka ah ee daanyeerka ee aad kor ku qortay qofba si ayuu u qaadan karaa. Anniga waxeey ila tahay daanyeerka geedkii uu isku dhoobay, oo uu liintiisa cunayay, hadii dhagax lagusoo tuuro, oo uu liin u tuuro, in uu caqli xun yahay xayawaakaas.
Doofaarka laaluus ima siin, wadaay, laakiin, maadaama uu xaaranyahay, ayaanan u isticmaaliin xayawaankaas. Asxaan ayaanba u sameeyay caqli daanyeerada Somalida hadii aanan ugu yeerin doofaar doofaar dhalay!
Mr : BaHaL sln guddoon . Sxb nin baa nin kale weydiiyey su’aal . Adiga ayaana jawaabaya ee miyaadan u gafeynin qofkii la weydiiday su’aasha . Waayo waxaad mr. Cadaado ka dhigtay sidii qof aan isku filneyn oon bixinkarin jawaab .
sxb waan kaa gumoomey ee adna mid la mid ah iga gudoon.
Anuu waxaan ahay Freedom Fighter.Absutly,su’aalaha Wiil Ciideed uu waydiiyay Cadaado,waxay ahaayeen kuwo hunguri ku salaysan sida ay u dhanyihiin.Habaraatee inay dadnimo jirto,oo Somalinimo jirto,oo ay geesimo jirto ayuu meesha ka saaray.
Dee hadal yaayan kugu daalinine,waxaan eegi kariwaayay su’aalahan wada xayraanka ee ninkan Wiil ka soo fulay,dee shiishka ayaa si fiican u qabtay. Ogoow oo Reerkana waan ku kacsanaa,oo hunguriga waan ku xantaa.kkkkk
adiga oo aad u mahadsadsan qodobkaas aad garatay waa waxa su’aalaha igu dhaliyay wuxuuna ahaa sabab aad jawaab u codsaday waxaan rabay marka uu dhaho si daacad ayaan u taageeraa in aan u mahadceliyo sababtoo ah waa nin soomaali wax la raba oon anigu ka mid ahay.
haddii aan rabo in aan cadaado iska eedeeyo waxaan dhihilahaa ma qabiilbaad ku taageertaa waadna aragta in aan mowduuca qabiilka meesha ka saaray waayo kaasi waa uun af nin xanuunsan oo jin u shaqeeya ayaa qabiilka wax mooda.
Mida in Aad Axmed Madoobe taageero sax waana runtaa qabiilna kuma taageero. Ee waa geesi soomaaliya nin geesi ah ayaan la rabaa oo Gabre iyo Uhurru hush ku dhaha. Haddii aan fikradeyda aan Nimankan hadlay wax ka dhaho Kow waxaa codka koobaad siin lahaa Farmaajo 2na madaxwayne Xasan sheekh ninka dalka wax la raba sida Axmed cadde uu Jawaari ugu hambalyeeyay ayuu wax ka baran doonaa.
Shariifka iyo kuwan qabiilkayga sheegta ee CCC ugu horeeya shakibaan ka qabaa !!!!!
soomaali caqli xun.
Mahadsanid sxb sidaas u wada taageeradaada haddii aad dalka wax la rabto isku si unbaynu u wadnaaye waynaan isla garanin.
Aniga Xasan nin haboon iilama muuqdo oo afartii sano wax ma qabanin lkn kuwan meesha ka hadlay waa soomaali caqli kuwii aan ku dhihi jiray markaan erey kale oon ku qeexo garan waayo.
Wiil Ciideed, adaa mudan, bro,
waanse ku faraxsanahay kulana qabaa in aan isku si wax u wadno. Waana ok, ra’yiga dadka in iyaga oo isku destination u socda isku meel, eey ku kala duwanyahiin jidka loo raacayo meesha loo socda.
Taariiqda ayaa xussi doonta hogaamiyayaasha hadeer in eey horay wadanka u wadeen, oo dadka Somaliyeed isku aruuriyaan, sharafka iyo dalkeenana aan si nabad ah ugu wada noolaano, aduunkana aan nabad kula noolaano, iyo in eey fadhiid ahaadaan, oo eeysan waxba u qaban dadkaan Somaliyeed ee colaada, gaajada, is dilka, cudurada iskugu darsameen.
Hadaa waa ok.Inaan halmeela u wada jeesano way quman tahay oo danyeena ayaa ku jirta.Axmed Madoobe iyo Jawaari iyaga oo col ah Ayaan ogaa – goormay heshiiyeen?
Xasan sheik inuu soo noqdo way adag tahay oo waraabayaashan meesha marayaa way u heshiiyeen.
Fotmaajo iyo Tarsan Ayaa uGu roon waraabayaashan meesha maraya.
Runtii Formaajo wuxu u egyahay nin garanaya hawsha uu qaban lahaa.
wax soomaali ah oo col ah ama heshiis ah ayaaban jirin dadku haddii uu colaad ama heshiis isku ogaado wax uun ayaa ka soo baxa kkkkkkkkkkkkkkk
Hana dhimanay, hana noolaynin weeye .
ahmed faarax says:
soomaalida hadii jawaari shalay la doortay xasana soo baxo xaaladeeda alaha sahlo lkn hadii xasan soo bixi waayo dalka iyo dadkuba caymay leeyihiin